Afgembigii Dhicisoobay ee Turkiya iyo Soomaaliya oo Taageero La Garab Istaagtay Xukuumadda Erdogaan | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home ARRIMAHA SIYAASADDA Afgembigii Dhicisoobay ee Turkiya iyo Soomaaliya oo Taageero La Garab Istaagtay Xukuumadda...
Afgembigii Dhicisoobay ee Turkiya iyo Soomaaliya oo Taageero La Garab Istaagtay Xukuumadda Erdogaan
Inqilaabkii shanaad ee ka dhaca dalka Turkiga 15kii bishan ayaa fashilmay keddib markii shacabka Turkiga oo taageersan xukuumadda uu madaxweynaha u yahay Rajab Dayib Erdogaan ay iyaga oo malaayiin ah fagaarayaasha isugu soo baxeen inta badan magaalooyinka waaweyn sida Istanbul, Ankara, Azmir iyo kuwa kaleba. Masaajidada ayaa iyagana ka qeyb qaatay in dadka lagu dhiirrigeliyo in ay isu soo baxaan.
Madaxweyne Erdogaan oo fasax ugu maqnaa meelaha loo tamashlo tago ee Turkiga ayaa aaladda Face Time kala hadlay shacabka Turkiya, wuxuuna ugu baaqay in ay isugu soo baxaan fagaarayaasha iyo garoomada diyaaradaha, kana hortagaan koox kamid ah militarariga oo i sku daygan afgambi hoggaaminayay.
Yaa ka dambeeyay Afgambiga?
Waxaa la sheegay qaar kamid ah saraakiisha ciidanka cirka iyo qaar kale oo kamid ah ciidamada milatariga, lamaaha kale ee ammaanka iyo askar shaqada ka waa hore ka gaboobay ayaa ka qeyb qaatay iyaga oo la wareegay goobo muhiim ah sida telefishinka TRT, buundada isku xirta labada dhinac ee Istanbuul iyo garoonka diyaaradaha ee Ataturk ee isla magaaladaasi. Ciidamada booliska, nabad sugidda iyo ciidamo kale oo milatariga ah ayaa sutiga u qabtay, waxayna ku guuleysteen in ay soo qabqabtaan kooxdii afgambiga waday. Kooxdan Militariga ah ayaa lala xiriirinayaa inuu ka damabeeyay wadaadka Fatxullaah Gulen oo ku nool Gobolka Pennsylvania ee dalka Mareykanka, inkastoo uu beeniyay eedeymaha loo jeediyay. In ka badan 265 oo 161 ay yihiin rayid ayaa la sheegay in ay ku dhinteen rabshadaha ka dhashay inqilaabkan. Waxaa xabsiga la dhigay in ka badan 6 kun oo kamid ah askartii ku lug lahayd afgambiga iyo kooxo lala xiriirinayo Gulen.
Hogaamiyeyaasha mucaaridka ah iyo xukuumadda ayaa mawqif isku mid ah ka istaagtay inqilaabkan dhicisoobay. Hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee xisbiga shacabka ayaa sheegay in ay waqtigii afgambiyada milatariga uu dhamaaday, ayna difaacayaan dimuqraadiyadda. Ra’iisul Wasaarihii hore ee Turkiya Axmed Daa’uud Uglu oo xilka kaga tagay khilaaf isaga iyo madaxweyne Erdogaan ayaa isagana si kulul uga hadlay inqilaabka, isaga oo sheegay in weerarkan uu yahay mid lagu qaaday dumuqraadiyadda Turkiga iyo hay’ado si sharci ah lagu doortay. Madaxweynihii hore Cabdullah Gul ayaa isaga shacabka la hadlay, isaga oo si cad uga horyimid inqilaabka. Muxaafid iyo mucaaridba, iyaga oo kaashanaya taageerada shacabka, ayay muujiyeen midnimo looga soo horjeedo afgambiga.
Sidee lagu soo afjaray Afgambiga?
Afgambiga ayaa lasoo gabagabeeyay keddib markii madaxweyne Erdogaan uu kusoo laabtay Istanbul, kulana hadlay shacabka garoonka caalamiga ee Ataturk oo saacad kahor laga saaray ciidankii haystay kaddib markii ay shacabka ku qamaameen. Sidoo kale, taliyaha militariga qeybta Istanbul oo saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in aysan ciidanku shaqo ku lahayn afgambiga, ayna soo qaban doonaan kooxda khiyaanada qaran geysatay. Waxaa si lamid hadlay taliyaha ciidanka badda oo isagana gaashaanka ku dhuftay isku dayga. Wasiirka shaqaalaha iyo kumannaan shacab ah ayaa gudaha u galay xarunta telefishinka, iyaga oo kala wareegay kooxdii qabsatay. Ra’iisul Wasaaraha Turkiya ayaa isaga shacabka la hadlay, isaga oo ballan qaaday in sharciga la geyn doono kooxda yar ee hawshan soo abaabushay.
Taariikhd Afgambiyada Turkiya
27kii May, 1960kii ayaa inqilaabkii koowaad ka dhacay dalka Turkiga. Madaxweynihii, Ra’iisul Wasaarihii iyo xubinihii dowladdaas ee muhiimka ahaa ayaa xabsiga la dhigay iyaga oo lagu eedeeyay khiyaano qaran.
12kii Maarso,1971dii ayay militarigu markii labaad afgambiyeen xukuumaddii rayidka ahayd keddib markii ay dhaceen xasarado salka ku hayay dhaqaalo xumo ka dhacday dalka Turkiga.
12ka Sebtember, 1980kii waxaa mar saddexaad la wareegay talada dalka taliyeyaashii ciidanka militariga keddib markii ay dhaceen isku hor imaadyo u dhaxeeyay kooxaha kala aaminsan siyaasadaha midig iyo bidig.
28kii Febraayo, 1997dii waxaa markii afraad talada fara marooqsaday militariga keddib markii ay ku qasbeen Ra’iisul Wasaarihii Turkiga ee xilligaas Najmuddiin Erbekaan oo ay isku xisbi ahaayeen Erdogaan. Xisbiga Daryeelka oo uu Erbekaan hogaaminayay ayaa laga mamnuucay inuu siyaasadda mar kale kusoo noqdo. Hase ahaatee, markaas ayaa Rajab Erdogaan iyo ragga haatan xukunka ku wehliya ay aasaaseen xisbiga Caddaaladda iyo Horumarka ee 15kii sano ee lasoo dhaafay talo dalka hayay.
15kii Luulyo, 2016da ayaa markii shanaad ay qeyb yar oo kamid ah ciidanka isku dayeen in ay ridaan xukuumadda uu Madaxweynaha ka yahay Rajab Dayib Erdogaan. Hase ahaatee, way ku fashilmeen keddib markii uu kacdoon shacab ka horyimid . Waa markii ugu horreysay taariikhda Turkiya oo si cad ay shacabku u diidaan, muxaafid iyo mucaaridba, xukunka milatariga ah.
Madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ahaa madaxweynihii ugu horreeyay ee cambaareeya afgambiga. Waxaa sidoo kale mudaharaadyo lagu taageerayo xukuumadda sharciga ah ee Turkiya lagu qabtay magaalada Muqdisho kaasoo ay kasoo qeybgaleen wasiirro, Turki ka shaqeysa dalka Soomaaliya, bulshada rayidka ah, culumada, ganacsatada iyo maamulka gobolka Banaadir.
Xukuumadda Soomaaliya ayaa shir degdeg ah oo ay ka yeelatay arrinkan shaqada kaga joojisay hay’adda Nile oo mashaariic waxbarasho ka fulisa Soomaaliya maadaama lagu eedeeyay madaxdeedu in ay qeyb ka ahaayeen agfambiga dhicisoobay. Shaqo joojintan iyo masaafurinta shaqaalaha hay’adahan ayaa timid keddib codsi ka yimid dowladda Turkiga oo ay Soomaaliya kaga dalbaneyso inay iska saarto kooxdan qaswadayaasha ah.
Dowladda Turkiga ayaa abaal aan la iloobi karin u gashay shacabka Soomaaliyeed keddib markii ay gurmad bani aadamnimo iyo walaaltinimo la garab istaagtay Soomaaliya taniyo 2009kii oo abaaro ba’an ay dalka ku dhufteen oo ay wehliyeen dagaallo. Sidoo kale Turkiya waxay wali garab taagantahay dowladda Soomaaliya, iyada oo mashaariic horumarineed ka fulisay dalka sida dhismaha isbitaalka Rajab Dayib Erdogaan (Ex Digfeer) iyo dhismaha waddooyinka halbowlaha u ah caasimadda iyo Aadan Cabdulle.
Dowladda Turkiga waxay Soomaaliya ka furatay safaaradda ugu weyn ee ay caalamka ku leedahay, waxaan bishii Juun hoorraanteeda xariga ka jaray Madaxweyne Erdogaan. Taasi waxay muujineysa sida Taageerada iyo hiilka walaalaha Turkiya ay la garab taaganyihiin Xukuumadda iyo shacabka Soomaaliya.
Previous articleTartan Isboorti oo Lagu Soo Gabagabeeyay dalka Sweden
Next articleWalaac Laga Muujinayo Hannaanka Doorashada 2016 iyo Loollanka Mudanayaasha Labada Aqal oo Socda